Zuva reNyika Zvakatipoteredza Zuva: Shangu Dzinogara PasiCheck Kuzvipira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Zuva reNyika Zvakatipoteredza Zuva: Shangu Dzinogara PasiCheck Kuzvipira
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Bahamas Kuputsa Nhau • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Grenada Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Jamaica Kupwanya Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • Kutarisirwa • Mutsvene Lucia Breaking News • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
World Environment Day, Chikumi 5, 2020, izuva reUnited Nations rekukurudzira kuziva pasirese uye chiito chekuchengetedza nharaunda At Sandals Resorts & Mahombekombe, zuva renharaunda rinokurudzirwa kwete chete pazuva rino, asi mazuva ese mazana matatu nemakumi matatu nemashanu egore.
Ese maSandals Resorts anotora chikamu mu EarthCheck mabhenji uye chirongwa chechitupa. Kubva pakudzokororazve kusvika pakuchengetedza, kudavirwa kwezvakatipoteredza kuzvipira kweSandals. Nekuti maresitoreti ayo "girini" akagadzirwa nerudo, kuda nharaunda kwave kwechipiri hunhu.
Iyo EarthCheck chirongwa
Basa reSandals Resorts & Beaches ndere kupa ruzivo rwekuzorora rwekuCaribbean nekuvandudza, nekuvimbika, uye nekugara uchipa masevhisi akachengeteka uye epamusoro uye zvivakwa kune vashanyi, uku uchibatanidza mari yekutanga kune zviwanikwa zvevanhu uye uri pakati peakanyanya eco-hushamwari uye nzanga-dzakasununguka nzvimbo dzekuchengetedza muindasitiri yekugamuchira vaeni
Iyo Oceanic Standard
Iyo Oceanic Standard (TOS) inongedzo yakazara yekumisikidza zviitwa zvakagadzikana muindasitiri yekugamuchira vaenzi, ine tarisiro yekudzora imwechete-kushandisa mapurasitiki. Oceanic Global, simba riri kumashure kweTOS, inopa mabhizimusi mibairo avo vakawana mamwe matanho ekuzvipira mukutora zviitwa zvine mutsindo nematanho emabheji kuratidza kuzvipira kwavo mukuchengetedza uye zvirongwa zve eco-zvine hushamwari. Sandals resorts anodada nekugamuchira musiyano weSustainability Steward uye Straw-Yemahara Certified.
Maitiro Akanaka Ezvakatipoteredza
Sandals Group yakazvipira kuchengetedza zviwanikwa uye nekupa zviitiko zvezororo zvepamusoro kune vashanyi vayo pavanenge vachishanda kudzikisira zvakatipoteredza uye zvemagariro zviitiko zvine chekuita nekuita.
Nhengo dzechikwata dzinotora chikamu mumusangano nemisangano inoitiswa nekomiti yezvakatipoteredza, masangano emunharaunda, uye zvakare nemasangano ezvematongerwo enyika asiri ehurumende.
Chirongwa Chekuchengetedza Mvura
Kuongororwa kwekushandiswa kwemvura kwakazara pazvivakwa (madziva, dzimba dzevaeni, makicheni, dzimba dzekudyira, uye nzvimbo dzebindu) zvinowanzoitwa.
Energy Management Chirongwa
Kushandiswa kwetimers pazvinhu zvemagetsi senge ma whirlpools, makamuri emhepo ku spa, mwenje wekunze kwenzira dzekufamba, uye midziyo yefiriji mumakicheni, zvinobatsira kuchengetedza simba otomatiki.
Waste Management Chirongwa
Maitiro ekurasa marara nemaitiro munzvimbo dzeSandals dzakadai sekudzokorodza machira uye machira, chikafu, pepa rehofisi, uye mapakeji, chikamu chemuitiro wezuva nezuva webasa.
Kudzora kwezvinhu zvine njodzi
Sandals Resorts & Beaches inosarudza kukodzera kwechigadzirwa chose pasati patengwa chero chinhu uye inopa kudzidziswa kwakazara kwevashandi chero makemikari matsva kana zvishandiso zvakatengwa kuti zvishandiswe muhotera.
Zvemagariro & Tsika Dzekusimudzira
Mukutsigira yetsika nemagariro emuno, Sandals inokurudzira nekutengesa kushanya kwenzvimbo uye zvinokwezva nekuzivikanwa kwakanyanya kwe "green tours" pamatafura ayo ekushanya. Sandals Resorts inokoka vatengesi vemunharaunda munzvimbo dzayo kuratidza uye kutengesa zvinhu zvavo zvehunyanzvi - zvinokosheswa nevashanyi pamwe nevemhizha.
Yese Sandals Resort yakabvisa mashandisiro epurasitiki-ega uye maresitoreti anoshandiswa munzvimbo dzayo dzekutandarira. Eco-inoshamwaridza mapepa mashanga anowanikwa pakukumbira.
Yese Sandals Resort yakabvisa Styrofoam inoshandiswa munzvimbo dzayo dzekutandarira. Iyi ingori imwe nzira iyo Sandals inoderedza tsoka yayo yezvakatipoteredza uye nekuvandudza hutano hwenzvimbo dzeCaribbean.
Iyo Sandals Foundation
Sandali 'philanthropic ruoko, iyo Sandals Foundation, inoenderera mberi nekusimudzira zvirongwa zvinotarisa mukuvandudza nharaunda, dzidzo, uye nharaunda semupiro wayo mukusimudzira budiriro munzvimbo isina kusimba.